महन्थ र राजेन्द्र बालुवाटारमा, आज-भोलि नै सरकारमा जाने तयारी – Dullu Khabar
१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:२५
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो ‍प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारमा सहभागी हुने विषय छलफल गर्न उनीहरू बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओली र नेताहरू ठाकुर र महतोबीच छलफल भइरहेको छ।
‘हामीले आठ मन्त्रीसहित २ राज्यमन्त्री मागेका छौं। कुरा लगभग मिलिसकेको छ,’ ती कार्यकारिणी सदस्यले भने,‘आज वा भोलिमा सरकारमा जान्छौं होला।’
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद बढेका बेला संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हात मिलाएर आ-आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादवलाई र अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई पार्टीबाटै निस्कासनसम्मको कारबाहीको चेतावनी दिएका बेला भट्टराईले आ-आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘अहिलेको राजनीतिक संकट पुरानो विचार, पार्टी र नेतृत्वको सामुहिक विघटनको अभिव्यक्ति हो। नयाँ निर्माण निम्ति पुरानो भत्कनैपर्छ। समयले नयाँ ध्रुवीकरण खोज्दैछ,’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘अत: मान्छे तानातान र किनबेचको तमासा नगरौं! भेडाभेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुन दिऊँ! हात मिलाएर आ-आफ्नो बाटो लागौं! हिडिरहे फेरि भेट हुनेछ!’ सेताेपाटीबाट साभार